Madaxweynaha Hir-Shabelle oo gaaray Baledweyne kulamana kula qaatay bulshada qaybaheeda – Idil News
Madaxweynaha Hir-Shabelle oo gaaray Baledweyne kulamana kula qaatay bulshada qaybaheeda
Posted By: Jibril Qoobey March 25, 2017
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa halkaasi galabta kulan kula qaatay xubno ka socday bahda waxbarashada ee gobolka Hiiraan, iyo aqoonyahanada magaaladaasi Ku dhaqan.
Kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa sidii u dhiiragalin lahaa madaxweynaha, waxbarashada, iyo in uu ku baraarujiyo in lagama maarmaan ay tahay xoojinta isdhex galka bulshada taasi oo qeyb ka qaadan karaan macalimiinta iyo maamulada dugsiyada waxbarasho.
Aqoonyahanada iyo Xubnaha matalayay bahda Waxbarashada ayaa Madaxweynaha sharaxaad ka siiyay sida ay u shaqeeyaan iyo caqabadaha heysta, ayagoo ka dalbaday dowladda Hirshabelle in ay ka gacan siiso horumarinta Waxbarashada.
Madaxweynaha dowlad Goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble ayaa sheegay in gobolka Hiiraan xoghaye iyo agaasimayaal matala wasaaradda waxbarashada la magacaabi doono si ay u sahlanaato ka wada shaqeynta horumarinta waxbarashada.
Madaxweynaha oo sii hadlay ayaa aqoonyahanada ka codsaday in ay garab istaagaan dowladnimada xilna ay iska saaraan horumarinta is dhex galka bulshada Iyo amniga.
Kulankaasi ayaa waxaa madaxweynaha ku wehlinayay agaasimaha guud ee madaxtooyada Hirshabelle C/qaadir Cabdulle Xooshow, guddoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Cali Jeyte, iyo mas’uuliyiin kale, waxaana inta madaxweynuhu uu Ku suganyahay Beledweyne uu kulamo kale duwan uu la yeelan doonaa qeybaha kale duwan ee bulshada, saraakiisha ciidamada Qalabka sida Iyo kuwa Amisom, iyadoo uu booqan doono meela kale duwan oo magaaladaasi ah.